Darpan Nepal – ४ छोराका धनी ७० बर्षीय बृद्दकी पत्नी बितेपछि सडकको बास !
४ छोराका धनी ७० बर्षीय बृद्दकी पत्नी बितेपछि सडकको बास !
हेटौंडा । मकवानपुरको बिकट कैलाश गाउँपालिकाको साबिक कालिकाटार गाउँ विकास समिति–८, कटुञ्जेका मानबहादुरलाई विहान हेटौंडा बजारको सीमाचोकमा आँखा मिच्दै गरेका भेटिन्छन् । दिनभर कर्रा खोलानजिक ज्याला मजदुरी गर्न गए पनि बेलुका सुत्न सीमाचोकको दक्षिणपट्टि पसलको पेटीमा आइपुग्छन् उनी ।
उमेरले सात दशक कटेका नेपाली पत्नी बितेपछि एक्लिएका हुन् । उनको दुई महिनादेखि सडकमा बास भएको छ । उनी बेघरबार छन् । ४ छोराका धनी मानबहादुर बिखर्ची छन् । उनलाई माया गरेर खान दिनेहरु भए पनि बस्ने छानो नहुँदा उनको रात भने सडकमा बित्छ ।
पहाडमा भएका थोरै पाखोबारी बेचेर ९ वर्षदेखि पत्नीको उपचार गरेर रित्तिएका उनलाई छोराहरुले पनि साथ छोडिदिए । बल छउञ्जेल ज्याला मजदुरी गर्दै कोठा भाडामा लिएर बसेका थिए उनी । तर, अब त्यो पनि गर्न नसकेपछि उनले कोठाभाडा तिर्न सकेनन् । भाडा तिर्न नसकेपछि कोठा छाडेर ठूला घरका पेटीमा रात बिताउन उनी वाध्य देखिए ।
नागरिकता भए बृद्धभत्ता आउँथ्यो, त्यो पनि छैन । नागरिकता बनाइदिन सहयोग गर्नेहरु नहुँदा उनी राज्यका सुविधाबाट बञ्चित छन् । छोराहरु कहाँ छन् भन्ने थाहा छैन । ‘बृद्धाश्रम पुग्न पाए जाडो महिनामा राहत हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । तर, त्यो स्थानसम्म पुग्नसक्ने वातावरण उनले पाएका छैनन् ।
Previous Postटी-२० विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनोट ‘बी’को उपाधि नेपाललाई Next Postमलेसियामा छायांकनरत "तिम्रो मनको" भिडियो रिलिज, पदम र कल्पना एक अर्कामा दुबे यसरी